कल्पना बान्तवा - कान्तिपुर समाचार
कल्पना बान्तवाका लेखहरु :
सिम्माको पानीफोटो !
मन्त्र जप गरिरहँदा जपमालाको सुमेरु नाघ्न हुन्न भनेर सिकाउँछन्, पुराना जपालुहरू ! व्यवहारका कति सुमेरु पनि नाघ्न नहुने हो जिन्दगीमा सायद । मायाप्रेमका मधुर/मदिर स्मृतिलाई पनि सजाइराख्न सक्नुपर्ने हो हृदयमा, तर त्यसो नहुँदो रैछ !
गलत कायामा अड्केको मान्छे !
विभिन्न मन्दिरहरूका प्रांगणमा, सन्चोले चारा टिपेर भुर्रर उडिहिँड्ने परेवालाई एकाएक अँठ्याएर उड्न नदिँदा कस्तो अनुभव गर्दो हो बिचरा त्यो ! वनमा खाइखेली हुर्किरहेका चरालाई पक्रिएर ल्याई पिँजडामा थुनेर बजारमा बिक्रीका लागि राखिएको देखिन्छ, स्वतन्त्रता गुमाएर पराधीन बनेका ती निरीह पन्छीलाई कैदमा कुँजिँदा कति छटपटी हुँदो हो !
जीवन निस्सार छ मेरी मुवाँ !
मैले यसअघि केहीपटक छापाहरूमा लेख लेखें– मुवाँ जानुभो ! आमा जानुभो ! तिनीहरू लेखिएका सन्दर्भ थिए– अस्थायी रूपमा केही समय काठमाडौं बसेर मुवाँ पुनः सप्तरी घर फर्कनु ! ती बेलामा पनि मलाई मुवाँको विछट्ट न्यास्रो लाग्थ्यो, तर बिस्तारै मुवाँबिना काठमाडौंमा बस्न र बाँच्न बानी पार्दै जान्थें ।